TAONA 2009 - RAMANANTSOA Tovo
Misy ireo zavatra mandritra ity taona 2009 ity
Nandeha nitsangatsangana tany andranomandroatra izahay tamin'ny volana oct 2009 , nahafinaritra ny tany , misy vidéo kely ity nanamarika ny tany.
Vao tamin'ny 5 ora sy 30 mn(07/10/2009) dia efa taitra i toavina fa hoe andeha hianatra, rehef tonga ny ampitso izany hoe ny 08/10/2009 dia hoy izy hoe : dada mbola mazoto hianatra aho. Mahafinaritra ry zandry tohizo ny fahazotoana fa tsara, mianara tsara fa hafa ihany ny mianatra e. Hita ato anaty vidéo ato ny momba izany.
Nanao krismasy tany am-pianarana i toavina tamin'ny 18/12/09 , efa lasa lehilahy lehibe le zanako eto ambany eto ny video momba izany.
Tany mahajanga no nanao fialan-tsasatra izahay tamin'ity taona ity teo (13 -20 sept) nahafinaritra ny vacances. ireto ny video momba izany. Tany amborovy no nipetraka izahay , midina 2mn dia tonga eny amoron'ny ranomasina, nandeha tany amin'ny lac sacré ihany koa nitsangatsanganana.